Harald Gustafsson को ठूलो वेश्या | Apg29
Harald Gustafsson को ठूलो वेश्या
झूटा ख्रीष्टियन - यो तस्वीर मा उत्पादन जो Fallen च&
दुई सम्पूर्ण अध्याय ठूलो वेश्या विवरण गर्न प्रकाश समर्पित। त्यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना, यी अध्याय उपचार छ जो कि यसैले बुझ्छु।
Harald Gustafsson एक घरेलू नाम थियो र उहाँले 1945 मा Gothenburg मा एक पेन्टेकोस्टल स्माइर्ना चर्च मा पास्टर हुनुहुन्थ्यो - 1967. उहाँले प्रकाश देखि एक पुस्तक हकदार संदेश लिखित छ। किताबको अध्याय, महान् वेश्या हकदार को एक।
वेश्या माथि ठूलो। 17 र 18
व्यक्तिगत सिस्टम हामी समय लामो अवधि फैले, प्रकाश मा सामना छ। यो जनावर छ त - मण्डली - - यो मूर्तिपूजक राज्य शक्ति, र यो दुलही छ त र पनि ठूलो वेश्या संग। तपाईं आफ्नो ऐतिहासिक सन्दर्भमा तिनीहरूलाई देख्न छ। प्रकाश गरेको अनौठो तस्बिरहरू बुझ्न हामी भने ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट आवश्यक छ। दुई सम्पूर्ण अध्याय ठूलो वेश्या विवरण गर्न प्रकाश समर्पित। त्यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना, यी अध्याय उपचार छ जो कि यसैले बुझ्छु।
ठूलो वेश्या कसले हो?
झूटा ख्रीष्टियन - यो तस्वीर मा उत्पादन जो Fallen चर्च छ। यो तस्बिर अक्सर प्रयोग बाइबल छ, परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसपछि व्यभिचार सचित्र गरिनेछ। पुरानो नियमका इस्राएलका परमेश्वरको अविश्वासको अगमवक्ताहरूमा skökoväsen भनिन्थ्यो। र नयाँ नियममा चर्च प्रभु गर्न अविश्वासी हुँदा, त्यो आफ्नो आँखा मा एक वेश्या हुन जान्छ।
Moderskökan रोमन क्याथोलिक papacy भन्दा अन्य जो कोहीलाई पनि हुन सक्दैन। यो चर्च पृथ्वीमा अन्य skökokyrkor आमा छ।
ठूलो वेश्या र दुलही सभा प्रत्येक अन्य उत्तम Opposites छन्। एक अंग्रेजी लेखक aptly भिन्नताहरूलाई औंल्याए छ। एक शुद्धता नै प्रतिनिधित्व गर्दछ; अन्य नैतिक rottenness उनको बनाउन सक्छ कि, त्यसैले अशुद्ध छ। एक थुमा चल्ला छ; अन्य पृथ्वी दुष्ट राजा सँग सम्बन्धित छ। एक धार्मिकता एक शानदार सेतो राज बस्त्र लगाएका छ; बैजनी, लाल रंग र सुनको पार्थिव महिमा को दोस्रो कूटवेश। एक स्वच्छ कुमारी छ; अन्य पृथ्वीको harlots आमा छ। एक घृणा र खेदो छ; अन्य पिएको सन्तहरू को रगतले छ। दुलही, हामी स्वर्ग महिमा शोभा को दृष्टि गुमाउन; वेश्या अन्धकारमा गायब र खपत उनको कि सम्पत्ति गरेको आगो देखि धूम्रपान।
यो रोमन क्याथोलिक वेश्या चर्च एक पटक थियो दुल्हन मण्डलीको apostlatidens भयो। तर प्रविष्ट र exuberant आत्मा जीवन नष्ट बर्बाद। Priestcraft आध्यात्मिक सेवा र आध्यात्मिक उपहार को सट्टा, अन्ततः आए। र सम्राट Constantine रोमी सरकार संरक्षण अन्तर्गत पुरानो क्याथोलिक चर्च लिए गर्दा, यो पहिले नै papacy लागि पाकेको थियो।
उनको मा थियो वेश्याले सुनको कप abominations र उनको व्यभिचार को अशुद्धता को पूर्ण हात। Abominations अक्सर धर्मशास्त्रको मा मूर्तिपूजा को नाम हो। र रोमन पोप मूर्तिपूजा यसलाई प्राप्त गर्न सक्छन् रूपमा, त्यसैले पूर्ण मूर्तिपूजक छ। यो परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा छ, मूर्तिपूजा मात्र छैन। पोपको परमेश्वरको ठाउँ दाबी। पृथ्वीमा ख्रीष्टको प्रतिनिधि हुन दाबी। लियो एक्स - यो पोप मार्टिन लुथर समकालीन थिए जो - ईश्वरीय आदर पाए। Lateran परिषद यी शब्दहरू मा उहाँलाई आदर भुक्तानी: "हामी अत्यधिक आफ्नो ईश्वरीय बडाई प्रशंसा गर्छौं। तपाईं चर्च गरेको पति, प्रेरितहरूको, ब्रह्माण्डको प्रभु र राजा को राजकुमार छन्। तपाईं गोठालो र डाक्टर छन्। तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ। "
अर्को पोपको, Pius IX, आफूलाई यसो भन्नुभयो: "म बाटो, सत्य र जीवन हुँ"
यसलाई जो मारिया सम्प्रदाय यस चर्चमा उपस्थित छ, मूर्तिपूजा र सन्तहरू को उपासना, केही छ तर पुरानो मूर्तिपूजक mångguderiet, चर्च को मूर्तिपूजक संसारबाट जन्मजात र त्यसपछि जो अलिकति मसीही tinge दिनुभयो। को papacy भित्र मरियम दुवै परमेश्वर पिताको र येशू ख्रीष्टको supplanted छ। मेरीले मध्यस्थ छ। हो, त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
असंख्य सन्तहरू को पोपको चर्च गरेको उपासना र adoration यो बारेमा बोल्न अनावश्यक हो, त्यसैले प्रसिद्ध छ। Skökokyrkans सुनको कप abominations को पूरा।
यो कागती पनि उनको अशुद्धपन व्यभिचारले समावेश गर्यो। यो वार्ड मास्टर उनको विश्वासघात को पहिलो उदाहरण मा राम्रो गर्ने लक्ष्य लिएको र उनको संसारको ठूलो र यसको अगुवाहरू गर्न acquittal। उनको आध्यात्मिक व्यभिचार जा।
तर papacy पनि नैतिक क्षय को एक पातालमा अवस्थित छ। क्याथोलिक पूजाहारीहरू अक्सर धेरै fornicators गरिएको छ। अविवाहित जीवन आफ्नो प्रमुख श्राप भएको छ।
रोमन क्याथोलिक seminaries मा, एक jesuitteolog Alphonsus मारिया डे Liguori को नैतिकता धर्मशास्त्र एक पाठयपुस्तक। यो पाठयपुस्तक अनैतिकता र अनैतिकता र यौन विकृति को सबै प्रकार मा एक विस्तृत निर्देशन प्रदान गर्दछ।
नार्वेजियन लेखक मार्ता Steinsvik सेन्ट Peters Himmelnökler को शीर्षक तीस वर्ष पहिले एक पुस्तक प्रकाशित। त्यहाँ, त्यो कि क्याथोलिक पूजाहारीहरू बिल्कुल क्रोधित बनाए तरिकामा पोप सुप्रकाश अनैतिकता प्रकट गर्छ। पुस्तक सबैभन्दा भाग मुख्य रूप Liguoris नैतिक धर्मशास्त्र देखि मात्र उद्धरण तर पनि अन्य क्याथोलिक लेखक 'पुस्तकहरू देखि लागि हो। यी उद्धरण पुस्तकको ठूलो खण्डहरू मसी ढाकिएको छ, अश्लील रूपमा सेन्सर छलफल भएको थियो।
जब क्याथोलिक पुजारी राम्ररी यो पाठयपुस्तक सिकाउँछन् रूप मा, अनैतिकता र यौन विकृति बारेमा ज्ञान प्राप्त उम्मेदवार, तिनीहरूले क्याथोलिक confessionals आफ्नो सेवाको लागि तयार हुन मानिन्छ।
कसरी धेरै confessionals मा पूजाहारीहरूले द्वारा आकर्षित गरिएको छ जो महिलाहरु हजारौं, गन्न कुनै परमेश्वरको भन्दा शायद छ। क्याथोलिक Confessional सायद कुनै पनि अन्य भन्दा नैतिक आदर मा प्रमुख श्राप स्रोत भएको छ। मेरो बयान को शुद्धता शङ्का गर्नेहरूलाई मार्ता Steinsvik गरेर माथि उल्लिखित पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ वा पूजाहारी, महिला र पचास वर्ष क्याथोलिक चर्च belonged र एक पुजारी थियो जो चार्ल्स Chiniquy, को स्वीकार बुक।
ठूलो वेश्या र जनावरको
जनावरको, हामी औंल्याए रूपमा यसअघि, मूर्तिपूजक स्थिति। यो लाल रंग जनावर मा वेश्या बसे। यो सरकार वेश्याले चर्च समर्थन, पहिलो, हो। Constantine मसीही चर्च, राज्य धर्म उच्च जब यो थाले, र यो राज्य आश्रय र सुरक्षा अन्तर्गत आए। यो चर्च गरेको प्रमुख दुर्घटना भएको थियो। Admittedly सरकारबाट रक्तपातपूर्ण सतावट समाप्त, तर चर्च पनि राज्य निर्भर भयो। साझा यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सबै सरकार-समर्थित र केही हदसम्म राज्य पुरानो क्याथोलिक मसीही चर्च सञ्चालन। पछि, papacy राज्य माथि पुगेको छ। राज्य संग सहमतिलाई चर्च गरेको खतरनाक skökoväg को कदम को एक थियो।
तर जनावरको बसिरहेका को वेश्या पनि त्यो reins लिन र आफ्नो हातमा नेतृत्व र आफ्नो खुशी मा राज्य शक्ति नियन्त्रण गर्न खोजे भन्ने हो। रोमन क्याथोलिक चर्च गरेको विकास मा, हामी धेरै स्पष्ट यस हेर्नुहोस्। को papacy एकदम चाँडै राजनीतिक अग्रसरता हात लाग्यो। शताब्दीयौंदेखि, देखि अगुवाहरू र emperors को पोपको र पोप अनुग्रह र अनुमोदन जीत competed। र तिनीहरूले अक्सर उनको आदेशहरू गर्न चर्च गरेको इच्छुक उपकरण गरिएको छ। उनको शक्ति पटक तिनीहरूले उनको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरे भने, emperors र राजा दुवै प्रतिबन्धित गरिएको छ कि त ठूलो भएको मा छ। मध्ययुगीन सम्राटहरूको धेरै भएको पोप द्वारा ताज पहनाया। को papacy हरेक तरिका ठूलो राजनीतिक प्रभाव प्राप्त। चर्च गरेको राजनीतिक प्रभाव अझै समाप्त भएको छैन। सायद आफ्नो शक्ति परमेश्वरको न्यायको अनुहार अघि, समय को अन्त मा पनि ठूलो हुनेछ।
एक दिन तथापि, फोहर सवार आफूलाई फेंक गर्न जनावर। त्यसपछि उनको कुटपिट öclestimma।
ठूलो वेश्या र पवित्र।
म हामी रोमन क्याथोलिक चर्चका बोल्न गर्दा, यो हामी सङ्केत गर्दै छन्, छैन व्यक्तिहरूलाई प्रणाली छ कि जोड गर्न चाहन्छौं। त्यहाँ भएको र अझै पनि यो चर्च मानिसहरू परमेश्वरको भय राख्ने, साथै एक पेन्टेकोस्टल चर्चमा छन् आध्यात्मिक skökoliv मा खसेको गर्ने मान्छे हुन सक्छ। त्यसैले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्रणालीका। "अनि म पवित्र जनहरूको को रगतले मातेका महिला देखे।" को papacy सँगै सबै क्रूर रोमन सम्राट भन्दा बढी रगत शहीदको बगाएको छ। यसलाई कम से कम पचास लाख शहीदको यो चर्च मृत्यु अनुमान छ। र धेरै सन्तहरू martyrdom संग जडान गर्न र छाया मा सम्राट् नेरोको गरेको बर्बरता सहित तल मा पोप क्रूरता।
यातना यसको साधन संग मध्य युग मा Inkvisationen सबैभन्दा diabolical को एक, थियो अरूलाई सास्ती गर्न आविष्कार। उनि, केवल आफ्नो सिकार हत्या सन्तुष्ट थिएनन्। मृत्यु एक मुक्तिदाता रूपमा आउनुअघि यी पवित्र को धेरै direst यातना undergo थियो। आधिकारिक जाँच कालकोठरी भयानक विवरण बाहिर थियो। विशेष गरी स्पेनिश inkvisationen एक रक्तपातपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको छ। सदस्यहरूले पोप नियुक्त Inkvisationsdomstolarnas।
रोमन क्याथोलिक चर्च आज अर्को न सैद्धांतिक अस्वीकार छ वा आधिकारिक आधिकारिक जाँच निर्मूल। 1908 मा Inkvisitionskongregationen nyorganiserades र सबै यो चर्च मण्डली बीच पहिलो अझै पनि छ। यस पोप आफूलाई यो संस्थाले prefect छ। यो तिनीहरूले heretics कल ती तिर चर्च मनोवृत्ति बारेमा धेरै भन्छन्।
रूस मा अर्थोडक्स चर्च भए तापनि आफ्नो समय आफ्नो विश्वासमा यस्तो मसीहीहरूले चर्च गरेको धार्मिक शिक्षाले भिन्न मा खेदो। धेरै रूसी क्रान्ति जडानमा bolsehevikerna liquidated जसमा अर्थोडक्स चर्च को निष्ठूर तरिका भन्दा आफ्ना आवाज र भ्काडी उठाएको छ। तर किन पनि अन्य विश्वासीहरूलाई चर्च गरेको पक्ष र आफ्नो पादरी देखि उजागर थिए कि क्रूर दुःखकष्टलगायत कुरा छैन। सन्तहरू को भीडलाई रूसी जेलमा languished र किनभने अन्य विश्वासीहरूलाई यस चर्च मनोवृत्ति को अमानवीय दुःख गर्न subjected छन्। एक अनौठो सम्बन्ध त चर्च राज्य एउटा करारमा मा प्रवेश, अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसकारण अर्थात् ख्रीष्टियनहरूले सताउन राज्य। चर्च भन्दा जब यो रक्तपातपूर्ण कार्य गरे। र सार्वजनिक अधिकारीहरु पछि यस्तो सतावट कार्यान्वयन गर्नुभएको हदसम्म, यो चर्च का उपकरण गरिएको छ। एक लेखक यसो भन्नुभयो: "फेरि फेरि, यो हत्यालाई मा सफल भएको छ, पत्र orthodoxy स्थापित शक्तिहरु बनाउने, ईश्वरीय víirldsordningens उपकरण, रगत लागि आफ्नो तिर्खा र यसको सतावट उतेजना को एक docile साधन मा। जहाँ एक förvärldsligad धर्म skökovíisen विश्व शक्ति, bewitching प्रलोभन शक्ति सुसज्जित महिला चढाई विश्व शक्ति स्कारलेट जनावर (प्रका 17), जहाँ हामी चाँडै जेलमा खोल्न हेर्न, ट्रंक चम्कने बस्तु र गलत मसीही न्याय पाप संग जहाँ यो स्वर्ग तिर अप थुप्रो संग सहमत छ।
वेश्याले पनि सन्तहरू रगत मादक पदार्थ सेवन छ।
ठूलो तिनीहरूले वेश्या
यो न्याय हदसम्म पहिले उनको लगे, एउटै जनावर लागू गरिनेछ। रूस मा, हामी रातो कम्युनिस्ट सरकारले अर्थोडक्स चर्च लुटेका छ र लगभग पूर्ण उनको चोट कसरी देखेको छ। एउटै मेक्सिकोमा केही वर्ष पछि पटक-पटक भएको थियो। यी उदाहरण मार्फत को पृथ्वीका राजाहरूले साथ vilcldjuret हुनेछ जब यो जानेछ कसरी एक विचार प्राप्त गर्न "को रण्डीको घृणा, र उनको उजाड र नाङ्गो थिएँ, उनको शरीर खानु पर्छ, र आगोले उनको बाल्न गर्नेछ" (प्रका 17: 16 ख)।
एक दिन राज्य बन्द चर्च सबै प्रभाव उनको अप पूरा गर्न, यो उनको अत्याचार हुनेछ मिलाउ, र सट्टा हुनेछ।
यो अझै पनि धेरै येशू ख्रीष्टको र पृथ्वीमा उहाँको काम चर्च को एक खिसी छ जो प्रणाली, असर कि, परमेश्वरको न्याय हो। र वेश्याले यो परमेश्वरको न्याय स्वर्गमा रमाहट evoke हुनेछ।
(: 20 प्रका 18); "परमेश्वरले उनको तिनीहरूलाई राखिएको छ लागि, र तपाईं को avenged भन्दा उनको भएको छ के, तपाईं स्वर्गमा आनन्द गर, र तिमीहरू पवित्र प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूलाई"।
प्रकाश अठारौँ अध्याय गरे वेश्या र बेबिलोन पर्याय अवधारणाहरु रूपमा महान् मा। यो केही हैरान छ। म यो दुलही र नयाँ यरूशलेम नै कुरा रूपमा तयार हुँदा जस्तै अनुपात छ ठान्नु। को वेश्या महान् बेबिलोनको रहछन गर्दा नयाँ यरूशलेम, दुलही गरेको अनन्त घर छ कि हालतमा राम्रो छ। त्यहाँ उनले एक रानी जस्तै बस्छन, र बाबेल आत्माको त्यो नजिकै। त्यसपछि बेबिलोन महान् अन्तर्गत गएपछि पनि परमेश्वरको धार्मिक न्याय वेश्याले छ।
ठूलो वेश्या, स्वर्गबाट ​​चेतावनी संकेत ध्वनि को उदास portrayal बीच।
"अनि म स्वर्गमा भन्नु अर्को आवाज सुने:
तिमीहरू उसलाई पाप को छैन सहभागीहरू हुन कि, उनको, मेरो मान्छे बाहिर आउन, र तिमीहरू उसलाई विपत्तिहरूका को प्राप्त छ। " (प्रका 18: 4)।
सबै आध्यात्मिक skökoväsen बाहिर आउन!
वेश्याले चर्च को न्याय लागू छ जब हामी पक्कै पनि समय धेरै नजिक छन्। हामी पनि थाह छ, समय थुमाको विवाहको लागि आउँदै। छ हामी त्यो आउँदा उहाँलाई भेट्न खुसी छन् त्यसैले हामी, हाम्रो स्वर्गमा हुनुहुने दुलहा गर्न unswervingly विश्वासी हुन सक्छ!
उहाँले चाँडै आउँदै छ! तयार हुनुहोस्!